Soo-saaraha naaftada, Soo-saaraha Gaas, Taxanaha Yanmar - Hongfu cusub
Hongfu AJ-C taxanaha waxay qaadataa mashiinka Cummins. Taxanaha Hongfu AJ-C waa mid leh kalsooni sare
Taxanaha Hongfu AJ-DE wuxuu qaataa mishiinka Deutz. Heerka Emission-EU II, EUIII labadaba taxanaha caadiga ah ee suuqa kala duwan.
Hongfu AJ-Y taxanaha waxay qaadataa matoorka Yanmar oo asal ahaan laga keenay Japan
Waan uqalmnay &
khibrad u leh arimahan
Awoodda Hongfu waxaa ka go'an inay noqoto khabiir adduunka ku takhasusay bixinta tamarta iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyadda cajiibka ah, naqshadaha heer sare ah, adeegga caalamiga ah ee leh qaybiyayaal kala duwan oo jooga 5-ta qaaradood ee 35-ka dal, kuwaas oo gebogebo u ah hagaajinta awoodda korantada adduunka. matoorrada korantada, golayaasha matoorrada gaaska dabiiciga ah, qalabka is-barbardhiga korantada. Kuwaas oo dhammaantood si ballaaran looga isticmaalo codsiyada saldhigga korantada, dhismayaasha, warshadaha, isbitaalada iyo warshadaha macdanta iwm.
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan alaabadayada ama qiimeeyaha, fadlan noo tag
Waa maxay cilmi baaris dheeraad ah oo ay tahay inay macmiisha ka filayaan inay ka arkaan Cummins Turbo Technologies?
Maalgashiga joogtada ah ee cilmi baarista iyo horumarinta tikniyoolajiyadda turubka naaftu waa mid socda oo waxay muujineysaa sida ay Cummins uga go'an tahay gaarsiinta warshadaha horseeda xalalka naaftada guud ahaan ee wadada weyn iyo wadada ka baxsan. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan hagaajinta teknoolojiyadda 'Holset', ku soo bii ...
Waa maxay waayo-aragnimada uu Cummins u leeyahay cilmi-baarista noocan ah?
Cummins wuxuu leeyahay in ka badan 60 sano oo waayo-aragnimo ah oo lagu horumarinayo turbo-bixiyeyaasha Holset wuxuuna adeegsadaa xarumaha tijaabada ee guriga lagu sameeyo si loo sameeyo imtixaan adag iyo falanqayn soo noqnoqda oo ku saabsan badeecadaha iyo teknoolojiyadda cusub. "Dynamics Fluid Dufnaanta Cilmiga Wejiga badan (CFD) waxaa loo isticmaalay in lagu daydo dhaqanka saliida ee sumadda s ...
Maxaa cilmi baaris dheeri ah ay tahay inay macaamiisha filayaan inay ka arkaan Cummins Turbo Techn ...
Maalgashiga joogtada ah ee cilmi baarista iyo horumarka ee turubka naaftada ...
Cummins wuxuu leeyahay in ka badan 60 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan horumarinta Holset turb ...
Qiimaha Diesel Generator, Jeneraal yar, Iibinta Generaalka la Adeegsaday, Qiimaha Generaalka, 240kw Generator, Generator-ka Naas-nuujiyaha leh Kubota Engine,